वर्षा र मनसुनको पूर्वानुमानमा खतराको संकेत:यस वर्ष बढी मनसुनी वर्षा,बाढी-पहिरोको प्रकोप बढ्ने ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
वर्षा र मनसुनको पूर्वानुमानमा खतराको संकेत:यस वर्ष बढी मनसुनी वर्षा,बाढी-पहिरोको प्रकोप बढ्ने !
काठमाडौं । नेपालसहित दक्षिण एसियामा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी मनसुनी वर्षा हुने भएको छ । मौसमी गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने एलनिनो र लानिनोमध्ये बढी वर्षा गराउने लानिनोको प्रभावका कारण यो क्षेत्रमा बढी वर्षा हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । एलनिनोको प्रभावका कारण अघिल्लो वर्षमा कम मनसुनी वर्षा भएपनि यो वर्ष पूर्ण रूपमा एलनिनोको प्रभाव नभएको र लानिनोको प्रभाव बढी भएको हुँदा मनसुनी वर्षा बढी हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
विश्व जल तथा मौसम संगठनको दक्षिण एसिया क्षेत्रीय मञ्च (सास्कोफ) ले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा लानिनोको प्रभाव बढी भएकाले वर्षा बढी हुने निष्कर्ष निकालेका हुन् । आगामी मनसुनी अवस्थाको विषयमा छलफल गर्न हरेक वर्ष हुने सास्कोफ बैठकले नियमित मनसुनी वर्षाभन्दा बढी वर्षा हुने निष्कर्ष निकालेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलले जानकारी दिए ।
‘लानिनोको प्रभाव बढ्दो रूपमा रहेको हुँदा त्यसैको प्रभावले आगामी मनसुनमा बढी वर्षा हुने निष्कर्ष निकालिएको हो,’ मौसमविद् पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समयमा मौसमी गतिविधिमा आएको परिवर्तन कारण मनसुनको समयमा एकैपटक ठूलो मात्रामा पानी पर्ने र पुनः रोकिएर केही दिन घाम लाग्ने समस्या भने कायमै रहन्छ ।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
उनले यस्तो अवस्थामा हुने वर्षाले कृषि क्षेत्रमा राम्रो गरे पनि मनसुनको समयमा बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्न सक्ने बताए । विश्व जल तथा मौसम संगठनले अघिल्लो वर्ष अत्यधिक गर्मी बढेको वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो । उसले मौसममा भएको फेरबदल तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण औसतमा १ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी भएको बताएको थियो । यो वर्ष दक्षिण एसियामा औसतभन्दा बढी वर्षाको सम्भावनासँगै तापक्रम वृद्धिका कारण प्राकृतिक विपद्को घटना भने बढ्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अहिलेसम्म काठमाडौंमा अधिकतम तापक्रम ३५ र तराईका जिल्लामा ४५ डिग्रीसम्म पुगेको देखिएको छ । यसपटक तापक्रम बढ्नुसँगै वर्षा बढी हुने सम्भावना हुँदा विपद्का घटना बढी हुनसक्ने पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । यो वर्ष पुसदेखि नै नियमित वर्षा भइरहेको छ ।
फागुनदेखि प्री मनसुन सक्रिय बनेको महाशाखाले जनाएको छ । वरिष्ठ मौसमविद् राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले यो वर्ष मनसुनी वर्षा विगतका तुलनामा बढी हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको बताए । आगामी वर्ष सुदूरपश्चिमी र मध्य क्षेत्रका जिल्लामा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने र पूर्वी भागमा औसत वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
नेपालको मनसुनमा पूर्वीवायुको योगदान ८५, पश्चिमी वायुको योगदान २ दशमलव ५ र प्री–मनसुनको योगदान १२ दशमलव ५ प्रतिशत हुने गर्छ । तर यस वर्ष पश्चिमी वायुको प्रभावमा हुने हिउँदे वर्षा बलियो रूपमा देखिएकाले प्री मनसुनको अवधिमा औसतभन्दा बढी वर्षा भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपालमा मनसुनी वर्षा औसत हुन्छ । नेपालमा गत वर्षको अप्रिल महिनामा ३० वर्षयताकै कम वर्षा भएको थियो । सास्कोफले एलनिनोको प्रभावका कारण प्रसान्त क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दा ठूलो खडेरी परेको निष्कर्ष निकालेको थियो । विज्ञहरूका अनुसार लानिनोको प्रभाव बढ्दा प्रशस्त वर्षा हुने गर्छ ।
सास्कोफले गरेको पूर्वानुमानअनुसार भारतको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुनेछ । उसले आगामी मनसुनको समयमा अफगानीस्तान, भुटान, बंगलादेश, म्यानमारमा सामान्य वर्षा हुने अनुमान गरेको छ भने पाकिस्तानको प्रायः सबै भाग र नेपालमा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालको औसत वर्षा १ हजार ४५० मिलिमिटर मानिन्छ । मनसुनी वर्षाको अवधि १० जुनदेखि २३ सेप्टेम्बरसम्म रहने गरेको छ ।
नेप्सेमा १४ अंकको गीरावट
काठमाडौं । आइतबार सेयर बजार परिसूचक नेप्से १४.०७ अंकले घटेर १२३३.२घ अंकमा झरेको छ । बजारमा क वर्गका […]
काठमाडौंका यी ठाँउमा सर्वसाधारणले निःशुल्क इन्टरनेट चलाउन पाउनेछन्
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात सार्वजनिक स्थानमा इण्टरनेट जडान गरिएको छ । जडित इण्टरनेट नागरिकले […]
प्रियंकाले मागिन् माफी
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले हालसालै बेलायतमा आफू अभिनीत अमेरिकन टीभी सो ‘क्वान्टिको’ सार्वजनिक […]
चीनद्वारा दिगो सहयोगको आश्वासन
असोज १९। काठमाडौँ,छिमेकी चीनले भारतको अघोषित नाकाबन्दी व्यहोरिरहेको नेपालको आपूर्ति समस्या सम्बोधन गर्न […]
जीवनमरणको दोसाँधमा बिकिनी किलर !
‘मिस्टर जेलर, म अब धेरै बाँच्दिनँ होला, मरेपछि मेरो शव चिरफार नगरिदिनू, दूतावासमा बुझाइदिनू,’ करिब तीन […]